Indawo yokuQokelelwa kweVidiyo yoSondo yaMva nje kunye neyona iQhelekileyo
Ividiyo ye-Urdolls yesondo
Wamkelekile kwiphepha levidiyo lonodoli wesini. Oku iqulethe iividiyo malunga nayo yonke imiba yoonodoli besini. Siza kubeka nekrini yevidiyo yesondo yakutshanje ukuze abathengi babe nokuqonda okubanzi ngakumbi kweemveliso abazithengileyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ukwazi ngakumbi, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi nge-imeyile.
IiDolls zesini eziSilumko irobhothi Sex Doll
Ividiyo malunga neenwele ezinde eziDibeneyo zeNdebe yeDiyo yoDoll Victoria
Big Butt Indebe Victoria
Ividiyo malunga noMzimba oMdaka we-TPE Doll oMdaka woLusu lweUrsula Surrey
Ursula I-TPE Doll 161CM Oonodoli
Ividiyo malunga namehlo amaBrown aMdaka ngamaFutha oSondo ngesondo uRonald Rebecca
I-TPE Doll URonald Iidola zesondo
Ividiyo malunga neBanga eliPhakamileyo leBakala leSilicone eDola eDana Dierser
dana I-Silicone ecocekileyo Sex Doll
I-160CM Amehlo aMnyama aBanzi eStacey Bacon yeSondo yeVidiyo yeVidiyo
Amabele amakhulu 160CM I-TPE Doll
tpe unodoli abadala unodoli wesondo
Ividiyo malunga ne-Silicone Doll RZR Skin Texture ebonakalayo yeKitto
I-RZR 160CM Ikhithi
Ividiyo malunga neAsao Miko Pink Pink Amabele amancinci othando
UAsao I-TPE Doll Isikhuselo sefulethi
Ividiyo malunga Amehlo amaNtsundu aMnyama ama-TPE eSoll SaSa
SaSa 156CM Iidola zoThando
Ividiyo malunga noMnyama oMnyama oMkhulu weFlat Chest Toll ngesondo ngoJuni Doyle
NgoJuni Doyle Isikhuselo sefulethi Sex Doll
Ividiyo malunga neVita Roy 148CM E yeNdebe ye-TPE yeDoll eSondo eSondo
Indebe I-TPE Doll I-Smart Doll
Ividiyo malunga nesitayile saseYurophu B yeNdebe yeBrown Amehlo 160CM uSondo weSondo uSabina Coleridge
Sabina Amehlo amdaka 160CM
Ividiyo malunga ne-Eudora Surrey 166CM Blue Eyes Sex Doll
Ividiyo malunga namehlo amakhulu Amanqatha amaLips amakhulu uOlivia Gresham wabantu abadala abathandana ngesondo
UOlivia I-TPE Doll 148cm
I-170CM encinci yebele eluhlaza okwesibhakabhaka yamehlo amancinci u-Doll kaCecilia Arthur
Ividiyo malunga neenwele eziMdaka eziMdaka eziNtsundu ezi-158cm ze-TPE
158cm mabele Big Ii-TPE Dolls
Umlingani wamabele amancinci I-170CM Xaviera Jane yeSondo yeVidiyo yeVidiyo
Isifuba esincinci I-TPE Doll 170CM
Ividiyo malunga neCharming Ass Ass Kelly Max 150CM yeDoll yeSondo
I-TPE Doll Indebe Sex Doll
Ividiyo malunga ne-Sexy 161CM enkulu ye-Ass Roxanne William Sex Doll
Roxanne Ii-TPE Dolls yokuzonwabisa
Ividiyo malunga neNdebe eNkulu kodwa eMnyama yeStunner N 168cm Doll Vera Raman
Mkhulu Kodwa I-TPE Doll IVidiyo yeVera
I-Big Breast Elf TPE yeDoll yeVidiyo ye-168CM yeVidiyo kaMarcia Ralph
Ividiyo kaRalph Umlomo oqinileyo Elf Doll
Ividiyo malunga ne-166CM Elastic Big Ass Isifuba esincinci seSondo uJamie Jacob
Jamie Ngesondo omdala
Ividiyo malunga neFlat Chest emnyama Amehlo Amakhulu Amakhulu Akumi Hakumi Doll Doll
Akumi Videos I-TPE Doll
I-163cm yeenwele ezimnyama zeBunny yeNtombazana yeSondo yeDoll yeenyawo zikaHelen Minnie zevidiyo
Ngesondo Ividiyo kaMinnie I-TPE Doll
I-165CM Busty Black Skin Amabele amakhulu ezesondo ividiyo kaHarvey Josh
yokuzonwabisa omdala Harvey
Ividiyo malunga neLips eziTyebileyo amaBele amaBlue Amehlo oSondo ngeDoll 158CM uCynthia uGrace
yokuzonwabisa I-TPE Doll Cynthia
Ividiyo malunga nokulinganisa umnwe womntu RZR Doll Joint Yasuko
Japhan 160CM Yasuko
Wamkelekile kwiphepha levidiyo unodoli wesondo UBonnie. Ngaba unomtsalane kuye? Khawuleza umgoduse.
Uye wandibamba ngesandla wandikhapha wayowela kwi dance floor esiya kwigumbi langasese.
"Kwigumbi lenkwenkwana," wancuma wangena kweyona tafula ikude, endirhuqela kuye.
Iindonga zazibanda, zenziwe ngentsimbi eshiya uphawu lomkhenkce kumqolo wam ngokucinezelwa kuwo ixesha elide. Khange abeke mlomo wakhe kowam, oko bendisithi ndiza kuhla nengqele. Etsiba ukwanga, wabeka iminwe yakhe ende kwiqhosha eliphezulu lehempe yam kwaye waqalisa ukumbombozela ngokuthobela kunye nokubaluleka kokungakhali.
Utsale ihempe yam wayivula emagxeni akhe waqalisa ukutshayela ulwimi emabeleni am. Isandla esinye si brasha ithanga lam. Omnye ubambe izihlahla zam ngentla kwentloko yam. Amazinyo akhe avale ngokukhawuleza ejikeleze ingono yam emva koko wakhululwa, endifaka endorphins eshushu ndaziva ndinyibilika amathanga. Ndilibale nayiphi na into endinayo malunga nokuba ndikwindawo kawonke-wonke kwaye ndingaqapheli amazwi abantu ababini abazilungisa kwizipili ezingekho kwiinyawo ezili-10.
Uye wasebeza "Uyayithanda lento andithi? Intombazana emdaka."
"Ewe" kuko konke endikuthethileyo.
Isandla sakhe sidumbile ngaphakathi kum kwaye waphinda endlebeni yam "Intombazana emdaka emdaka" ndide ndeza.
Le vidiyo malunga nonodoli beerobhothi kwivenkile ye-urdolls. Iinkcukacha zevidiyo zendlela oyisebenzisa ngayo unodoli wesondo irobhothi ukuthetha. Irobhothi ngoku ixhasa kuphela English kunye neencoko zamaTshayina. Ukuba unomdla kwiirobhothi eziphambili ezikrelekrele. Ndicinga ukuba kuya kufuneka ujonge iirobhothi apha.
Wazalelwa kwaye wakhulela kusapho olunempumelelo kwidolophu esaphuhlayo. Ulahlekelwe ngudadewabo kuqhushumbe-mlilo kwaye wasungulwa kwiqela lemigulukudu. Nguye kuphela onokuphila kwihlabathi elikhohlakeleyo. Kodwa ngokuzimisela kwakhe kunye nenkalipho, ukwazile ukuhlala kude nengozi kwaye wagqitha kulindelo. Oku kwamjika waba sisazinzulu namhlanje. Usaqhubela phambili, kwaye ngoku usebenza ngeendlela zokukhusela iintlekele zejoloji. Ngokwenza njalo, unethemba lokujongana nexesha elidlulileyo kwaye ekugqibeleni alufumane uxolo angazange abe nalo ngaphambili. Xa imilebe yakhe inamathele esinqeni sakho, ulwimi olude lwesirhubuluzi lukusonga, luphulula incanca yakho njengoko iwe. Amehlo akhe aqaqambisa umnqweno wakhe, ngokuba umlomo wakhe wawusidla ngeesentimitha; Imilebe yakhe yathatha impefumlo ethambileyo, eyamenza wanomdla ngakumbi kuwe.
Isifuba sakhe, iinwele, imilebe ... Ukuqwalaselwa kweenkcukacha kuyamangalisa. Nangona andinguye umniniyo, ndiceba ukumthenga kwangoko emva kokuzama ukumgcina ngokwaneleyo. Khawufane ucinge ukuya ekhaya kunodoli wabantu abadala abakulindeleyo ebhedini. Siqokelele uninzi loonopopi bezesondo ezenzelwe ukuhlangabezana neminqweno yakho yesini.
IVita yi148cm TPE unodoli wesondo. Uyazibona iimpahla zangaphantsi ezimnyama kunye nesokisi esitokhwe. Ulunge kakhulu ngomqala weplatinam. Ungunodoli okrelekrele, apho anokubona khona amehlo, imilebe kunye nentloko inokuhamba. Wenza intetho encumileyo, kwaye kwavuthuza umoya ebusweni bakhe, yayinomtsalane kakhulu. Lo nodoli unokwenza umsebenzi wencoko yababini, kwaye ngokukhawuleza ufunde okungakumbi ngemeko yakhe kwividiyo.
Xa imilebe yakhe ibambelele esinqeni sakho, ulwimi olude lwesirhubuluzi luyakusonga, luphulula incanca yakho njengoko iwe. Amehlo akhe aqaqambisa umnqweno wakhe, ngokuba umlomo wakhe wawusidla ngeesentimitha; Imilebe yakhe yathatha impefumlo ethambileyo, eyamenza wakuthanda ngakumbi. Xa incam yakho idlula kwindawo eqinileyo yobumfihlo bakhe. Unokuluva ulonwabo olungenakuthelekiswa nanto, ubufazi balo buthintela isiseko sakho, kwaye ilizwi elimnandi liwela emlonyeni wakho. Xa wolula isandla ubeka isandla sakhe entloko, umangaliswe yindlela alunge ngayo iinwele zakhe. Xa ekugqibeleni uphendula kwiimvakalelo zakhe, uya kuncuma kwilungu lobudoda.